Tena famelana sy fampihavanana | NewsMada
Tena famelana sy fampihavanana
Mazava ny anton-dian’ny papa François eto Madagasikara, manomboka amin’ny 6 hatramin’ny 10 septambra ho avy izao. Amin’ny maha mpitarika fivavahana kristianina lehibe azy, taratry ny fanapariahana ny evanjely manerana an’izao tontolo izao ny laharam-pahamehany. Evanjely mifototra amin’ny fitiavana, amin’ny alalan’ny fifamelana ny rehetra na ny mpino na ny tsy mpino, mitondra fandriampahalemana ary manome fahatoniana eo amin’ny fiaraha-monina.
Tsy mora izany « asa masina » entin’ny mpitarika kristianina izany, fa tsy sarotra koa ny mandray ny hafatra avy amin’alalan’ny vavaka arahim-pinoana. Tsy handany ny fotoany hitsangantsangana na hizaha tany ny papa Ray Masina, matoa nanokana ny fandaharam-potoany ho an’ny Malagasy sy i Madagasikara, fa nanolo-tena hitory ny evanjely, ny filazantsara kristianina ho an’ny mpino malagasy.
“Fanjakana mahaleontena” i Vatican, foiben’ny Eglizy katolika, tarihin’ny papa. Manaraka ny toe-draharaha iraisam-pirenena na tsy mitsabaka mivantana aza. Tonga teto Madagasikara ny Papa Joany Paoly II ny taona 1989, nanombohan’ny naharavan’ny ady mangatsiaka teo amin’ny tandrefana (kapitalista) sy ny tatsinanana (kaominista). Roa taona taorian’izay, rava ny fitondrana teto amintsika, nanomboka ny demokrasia sy ny fahalalahana maneho hevitra.
Faharoa ao anatin’ny tantaran’i Madagasikara ny fitsidihan’ny papa Ray Masina antsika izao.
Niaina tao anaty krizy lalina, natetika ary naharitra i Madagasikara. Mijoro ny Komitin’ny fampihavanam-pirenena (CFM), misy ireo Tangalamena mitandro ny maha Malagasy. Saingy tsy tafavoaka aloha hatreto ny “tena fampihavanana”, ny “tena famelana”, ny “tena fampiraisana”, sns.
Ny azo antoka, hitondra ny “tena fampihavanana” ny papa François amin’ny alalan’ny evanjely, mifototra amin’ny fifankatiavana, ny fifamelana ary ny fahasoavan’ny tsirairay.